Ubani ongephuzi ngama-curls edlala ngokudlala? Mhlawumbe, yilabo kuphela abanenhlanhla abanikela wona ngokwabo. Okunye, ukuze uthole ama-curls amahle, kufanele ubheke izindlela ezahlukene. Noma kunjalo, izindlela ezikhona zokugubha azikho yonke indawo. Okubaluleke kakhulu ukubunjwa kwezinwele kanye nomthamo wabo wonke. Omunye angathatha izinwele zonke izinsuku, futhi othile ugcina imizuzu emihlanu kuphela ngemva kokushiya indlu. Ngaphambi kokuba uthole indlela evumelana nawe, uvame ukuzama izinketho eziningi.
Cabanga ngezindlela ezinhlanu ezahlukene zokwenza izindwangu ezinwele ezininde. Yiqiniso, isisombululo esikhulu kunawo wonke yisimemo samakhemikhali. Le nqubo isiza ukuthola ama-curls ayifunayo. Kodwa ngakolunye uhlangothi, kuthinta ikhwalithi yezinwele kakhulu, baqala ukudideka kakhulu, babe brittle futhi abomile. Indlela kuphela yokushintsha le hairstyle ukulinda izimpande zikhule emuva.
Okukhethwa okuncane kakhulu - sebenzisa ama-curlers, izinsimbi zokugubha, ukufaka izinsimbi nokunye okunjalo. Uma uthanda ukukhiya okuqinile ngesitayela se-Latin America pop divas, ke indlela yethu yokuqala iwukuba wena. Kuthatha i-eraser enkulu, amathrekhi ambalwa kanye ne-cap shower. Izinwele ezimanzi ezihlanzekile kufanele ziqoqwe phezulu kwekhanda emsila. Okulandelayo udinga ukubopha ama-braids, lapho kufanele kube khona i-ribbon ngayinye. Ububanzi bezinhlamvu ozisho wena. Abancani kakhulu, ama-curls aphezulu. Ikhefu lokugeza, eligqoke ngaphambi kokulala, lizovimbela izinwele ezivela ekuqotheni bese zigcina zihle.
Indlela yesibili yokwenza ama-curls amahle ngezinwele ezinde, kuhilela ukusebenzisa izinwele zezinwele, i-foam kanye nawo wonke ama-caps afanayo. Ukuze uthole ama-curls ase-Afrika, thatha izintambo ezincane kanye nokunyakaza kwe-zigzag ukuzwakalisa phezu kweziqu. Ngaphambi kwalokho, izinwele kufanele zigeze futhi ziphathwe nge-foam noma i-mousse ye-styling. Ebusuku, gqoka i-cap yokugeza. Ekuseni, ukhulule izinwele ezikhanda zezinwele bese uzibeka ngendlela oyifunayo.
Imfihlo yokwenza izindwangu ezinwele ezindala ku-style yaseHollywood, idalulwa ngendlela yesithathu. Ukuze uthole umphumela wamagagasi okunethezeka, uzodinga ama-curlers avamile noma ashisayo ngobubanzi bama-4 cm. Esikhathini esilandelayo, ukufakwa kwezinto ngokusheshisa kuyashesha, futhi izinwele zihlala isikhathi eside. Lungisa imigqa kusukela ekugcineni. Zama ukulandela isiqondiso esisodwa. Gcina izinga lokushisa imizuzu engu-20. Ama-curlers avamile kumele ashiywe ubusuku bonke noma abomiswe ngesambatho samasondo.
Indlela yesine izokufundisa ukuthi ungenza kanjani izindwangu ezinwele ezindala ngesimo se-zigzag. Ukubopha okumanzi ukulimaza ngokunembile ngomunwe, bese ugoqa ngesilwane. Thatha insimbi eshisayo bese ugoqa phakathi kwamapulethi ayo ngamunye eholela "imvilophu" ngamasekhondi angu-30-40. Linda kuze kube yilapho lipholile ngokuphelele. Sika izinwele zakho ngeminwe yakho bese uyilungisa nge-varnish.
Indlela yesihlanu yokwenza izindwangu ezinwele ezinwele, ezilula kakhulu. Geza ikhanda lakho bese uhlanza umswakama okweqile ngethawula. Okulandelayo, yenza i-tourniquet eqinile bese uyibeka ku-bump. Ungayilungisa nge-studs, ibhande le-raber noma inaliti yokubamba. Linda kuze kube yome ngokuphelele, uchithe, ufafaze i-varnish. Amagagasi anjalo angenakucabangela abhekwa njengemfashini enhle kakhulu futhi abukeka kahle kakhulu.
Clipper Panasonic ER 131: incazelo, ukubuyekezwa
Digital set-top box TV kuziteshi 20: Izibuyekezo